Dadka Madow oo looga digay inay Raacaan Diyaarada American Airlines |
Dadka Madow oo looga digay inay Raacaan Diyaarada American Airlines
Hay’ada u dooda xaquuqda dadka Madowga Maraykanka ee loo yaqaan NAACP ayaa soo saartay Digniin adag oo ka dhan ah shirkada Duulimaadka ee American Airlines oo lagu eedeeyey falal badan oo cunsurinimo ah.
Digniintan ayaa ah tii ugu horeysay oo ay hay’adan kasoo saarto shirkad diyaaradaha, waxaana lagu sheegay warbixinta hay’adan in muddooyinkii danbe ay isha ku heysay cabashooyin xad dhaaf ah oo la xariira falal cunsurinimo iyo dhibaateyn ah oo loo geystay dadka madow ee raaca diyaaradaasi.
Falalka lala beegsaday dadka laga tiro badan yahay ama kuwa madowga Maraykanka ee raaca diyaarada American Airlines ayaa waxaa kamid ah in si sharci daro ah looga dajiyo diyaarada, in lala beegsado erayo cunsurinimo ku dheehantahay, in kuraas khaldan la fariisiyo iyo falal kale oo badan oo lagula kacay si joogto ah boqolaal rakaab ah oo dhamaantood ah dad madow.
Kadib markii ay digniintan soo baxday ayaa waxaa durbaba laga dareemay baraha bulshada ku sheekaysato ee internetka gaar ahaan Twitterka qoraalo ay dad badan oo madowga Maraykanka ah iyo waliba muslimiinta dalkaasi ay kusoo bandhigayaan wixii ay kala kulmeen shaqaalaha diyaaradaasi markii ay raaceen iyagoo adeegsanaya #Happened2MeOnAA iyo #FlyingWhileBlack .
Shirkada American Airlines ayaa qoraal ay soo saartay sheegtay inay aad uga xuntahay warbixinta digniinta ah ee NAACP iyo cabashada shacabka, maamulka shirkadaasi ayaa sheegay inay deg deg arrintan wax uga qaban doonaan isla markaana balan qaaday inay kulan la yeeshaan saraakiisha ka socota ururada u dooda dadka laga tiro badan yahay.
Hay’ada NAACP ayaa bishii Agoosto ee sanadkan markii ugu horeysay taariikhda ururkaasi digniin kasoo saaray in dadka madowga ah ay ka feejignaadaan markii ay booqanayaan gobalka Missouri ee dalkaasi Maraykanka. Gobalkaasi oo la sheegay inay ku xoogan tahay cunsurinimada, isla markaana booliiska gobalkaasi ayaa lagu eedeeyey in 75% dadka ay joojiyiaan ama ay baaraan ay yihiin dadka madowga ah.
Tan iyo intuu xilka qabtay Madaxweynaha Maraykanka ee Donald Trump ayaa waxaa soo badanayey falalka cunsurinimo iyo isir-sooca ah oo ka dhacaya dalkaasi, waxayna horey madowga iyo dadka laga tiro badan yahay ee dalkaasi cabasho xoogan uga muujinayeen booliiska dalkaasi oo marar badan si khalad ah ku dilay dad madow ah.